Ukushaywa Kwezinombolo Zomshado - Ukubhula Ngezinombolo
Main Ukubhula Ngezinombolo Ukushaywa Kwezinombolo Zomshado
Ukushaywa Kwezinombolo Zomshado
Ake sithole ukuthi usuku esishade ngalo luthini ngobudlelwano bethu nangendlela umshado ozoqaqeka ngayo. Ukuze uthole ukuthi iyiphi inombolo yakho yezinombolo zomshado okudingeka ukuthi ukhiphe inombolo enamadijithi eyodwa osukwini lwakho lomshado.
Usuku lomshado lubhekwa njengosuku lokuqala lapho nobabili nithe yebo (kwamanye amasiko lokhu kubhekisela emcimbini wokuqala, lowo ophambi komthetho okhishwe kuwo isitifiketi somshado). Uguqula inyanga ngenombolo, isuke ku-1 iye ku-12 (1 + 2) bese ufaka usuku (lwezinsuku ezinamadijithi amabili udinga ukuzengeza ngokwehlukana) bese unyaka uqhubeka ngokufanayo.
Disemba 21 ukuhambisana kwezimpawu zezinkanyezi
Isibonelo, uma usuku lomshado kunguFebhuwari 29, 2010 kusho ukuthi: 2 + 2 + 9 + 2 + 0 + 1 + 0 = 16, 1 + 6 = 7. Ngakho-ke inombolo yomshado yesibonelo esingenhla ingu-7. Ngezansi uzothola izincazelo zazo zonke izinombolo eziyisishiyagalolunye zokubhula.
Lapho inombolo yomshado wakho ingu-1: lokhu kuphakamisa ukuguquguquka, umdlandla nokuzimisela. Lobu budlelwano buqoqa abantu ababili abanamandla abangakwazi ukuzenzela ngokwabo ngakho konke okwenzeka kuzithandani zabo. Kwesinye isikhathi omunye wenu angazama ukuthatha izintambo kodwa nakanjani uzofika esivumelwaneni lapho omunye eqala ukuncenga. Inombolo 1 iziqalo eziningi ngakho-ke ikhombisa ukuthi lo mshado wakhiwe ngothando oluvuthayo oluzoshintsha ngokuhamba kwesikhathi lube yisivumelwano sokuphila impilo efanele. 1 futhi kunobugovu obuningi kepha esimweni somshado ayikho into enjalo, bobabili abalingani bakhona ngoba befuna ukuxhuma izimpilo zabo futhi bangaziphatha ngendlela evuthiwe nenothando.
Lapho inombolo yomshado wakho ingu-2: kusikisela ezothando nokuthula. Kuyisici sabantu ababili abanqume ukuhlala ndawonye futhi abaxhunywe ngomuzwa oqinile wokuba yilungu. Okubili kunombhangqwana ngakho-ke cishe uzothola ngesikhathi ukuthi ufana nezicucu zepuzzle inqobo nje uma uncika komunye nomunye futhi nichitha isikhathi esiningi ndawonye ngangokunokwenzeka. Kodwa-ke, umshado wenombolo 2 ungaba ngaphansi kwengozi yokuba nezinto nokuba nomona uma ngabe nobabili anazi ukuthi kufanele nilinganise kanjani izifiso zenu. Kubalulekile futhi ukuthi uvumelanise imisebenzi yakho noma usebenze esizindeni esisodwa. Lo mshado ubuye ususelwe enethezelweni yasekhaya futhi nobabili ninesifiso sokuba nendlu nomndeni omkhulu.
wazi kanjani ukuthi owesifazane wescorpio uyakuthanda yini
Lapho inombolo yomshado wakho ingu-3: Le nombolo iphakamisa isimanjemanje, injabulo nempumelelo ejwayelekile. Kuchaza umbhangqwana onobungane futhi ovulekele kokuhlangenwe nakho okusha kepha futhi uncike ekunethezekeni komunye nomunye. I-3 eyobudlelwano obukhululekile ekunyakazeni, esinqumweni nasekucabangeni futhi okungamelela isivivinyo esinzima kwabanye abantu. Uma nikwazi ukuqonda nokwethembeka kini nakumaqondana wakho nakanjani kuzoba ngumshado lapho nobabili ningakhula futhi nilandele izindlela zenu. Ngakho-ke ungacabangi ngisho nokushintsha noma imiphi imikhuba yomlingani wakho. Lobu budlelwane obugcwele obungadlula izinkinga eziningi zempilo. Njengoba nje u-3 eyinani lezifiso ezi-3 lo mshado ungasebenza uma nobabili nifisa ukuthi usebenze.
Lapho inombolo yomshado wakho ingu-4: Leli inani lezinto ezine, zezinkathi ezine zonyaka futhi liphakamisa ukuzinza nokusebenza. Kuchaza ubudlelwano obuzokhuphuka ngokushesha bube bukhulu. Lo mbhangqwana uzinzile futhi unokwethenjelwa futhi imvamisa unamathuba amancane okuhlukana. Kodwa-ke, bathambekele ekukhungathekeni nasekuhlukaneni ngenxa yesithukuthezi nokungakwazi ukumelana nezilingo zangaphandle. Laba bobabili bakha umndeni ozinzile futhi ophephile kepha akufanele bakhohlwe yimizwa eqale yabahlanganisa futhi bakhumbule nje ukuthandana ngezikhathi ezithile. Lona ngumshado lapho laba ababili bebeka imali unomphela ebusosheni bobudlelwano babo futhi bavame ukuba nentshisekelo ekusebenzeni empilweni.
Lapho inombolo yomshado wakho ingu-5: Lena inombolo yothando nokuzijabulisa. Iphakamisa umshado owakhelwe othandweni nasezintweni ezivamile. Imvamisa iqoqa ubuntu obuyinkimbinkimbi nomqondo ongowabo abasesha unomphela ukuzidela nokuhlangenwe nakho okusha. Kungubambiswano phakathi kwabantu ababili bokudala abangasizana ukukhula. Laba bobabili banenkani, banomlilo futhi bayashesha ukuxabana lapho izinto zingahambi ngendlela abafuna ngayo. Ngokuhamba kwesikhathi lobu budlelwano busengcupheni yokuba ngaphansi kwethonya lenguquko futhi bobabili kufanele bakwazi ukuzivumelanisa nokuyekethisa ukuze izinto zilunge. Lokhu futhi kuyinombolo ephakamisa umndeni omkhulu nezinselelo ezivamile empilweni yomndeni.
liyini itshe lokuzalwa likajulayi 31
Lapho inombolo yomshado wakho iyi-6: Le yinombolo enamandla ekhombisa ukulingana, uthando nempilo enhle. Imvamisa kuyinombolo yenhlanhla futhi ikhombisa imizwa enamandla yomunye nomunye. Abantu ababili ababambe iqhaza kulo mshado bangabangane abasondelene nabalingani bokuphila ngaphezu kwakho konke futhi imvamisa uthando lwabo luvela ebudlelwaneni obukhulu bobungani. Laba bobabili bayazi ukuthi basebenzisana kanjani ukukhulisa umndeni futhi kuyaqabukela behlukane njengoba bevame ukuba nombono ofanayo ngempilo. Lo mshado unethemba, uyasebenza futhi uvame ukwakhela othandweni nasekuthembekeni. Lolu hlobo lwenyunyana luvame ukushiya ngemuva ifa elikhulu.
Lapho inombolo yomshado wakho ingu-7: Le nombolo iphakamisa ukunamathela okukhulu nothando futhi imvamisa ichaza izithandani ezizizwa zingcono uma zodwa noma zizungezwe abangane abaseduze. Laba bobabili bayakwazi ukuhlala uthando lwabo endaweni ekude evikelayo. Lolu hlobo lomshado lungaphezu kwakho konke olususelwa ekusondeleni kwengqondo nasekusebenzisaneni. Bobabili ophathina bayazi ngomthwalo omkhulu abanawo maqondana nabanye babo ababalulekile futhi imvamisa bayaqinisekisa ukuthi bayabasekela ngangokunokwenzeka. Bangaba nomzuzu bukhoma lapho bezizwa bebambekile kepha kungenjalo, inombolo engu-7 izithandani abalingani abaphatha ukugcina ubuntu babo kodwa futhi bakha okusha ndawonye.
Lapho inombolo yomshado wakho ingu-8: Le nombolo iphakamisa ingcebo, ukuchuma nokwethembeka. Lo ngumshado osuselwe ngokuphelele othandweni nasekuqondaneni okwaqala njengothando oluvuthayo. Laba bobabili banobuntu obuyinkimbinkimbi nobudlelwano obuqinile bengqondo ngakho-ke bavame ukuba nemisebenzi efanayo noma basebenze njengeqembu. Lolu yilolo hlobo lobudlelwano lapho bobabili abalingani benemigomo efanayo nokulindelwe empilweni ngakho-ke abavamile ukuphikisana. Okudingwa yilaba ababili ukuthi kwesinye isikhathi kufanele bavulekele umhlaba wangaphandle bangagcini ngamandla abo kuphela.
Lapho inombolo yomshado wakho ingu-9: Le yinombolo ephakamisa ukuphana, ukwethembeka nezothando. Lo ngumshado osuselwe ekuxhumaneni okuhle nasekulawuleni imizwa. Laba bobabili bavamise ukubhangqwa ngokushesha futhi abakwazi nokukhumbula ukuthi impilo yayinjani ngesikhathi bengashadile. Baqhamuka emikhakheni ehlukene noma emasikweni afanayo kepha lokhu kuzonandisa ubudlelwano babo kuphela. Izithandani ezinjengalezi ngeke zihlangabezane nezithiyo eziningi zangaphandle kepha zingaba nobunzima ekuqondeni nasekusebenzeni nesidingo senkululeko yomlingani oyedwa. Omunye nomunye wabalingani uzama ukubeka injabulo yomunye ngaphezu kwakhe kepha kungahle kube nokuzidela okuthile ukuze kufezeke le njongo.
IGemini Horoscope 2022: Izibikezelo Eziyinhloko Zonyaka
Indoda Yengulube: Izici Eziyinhloko Zobuntu Nezindlela Zokuziphatha
ilanga enyangeni ye-sagittarius kuma-pisces
uphawu lwe-zodiac lwango-februwari 9
pisces indoda libra woman arguments
luyini uphawu lwakho lwe-zodiac lwangomeyi 11
yimuphi unyaka wamashayina owawungu-1988
uma usuku lwakho lokuzalwa lungo-september uyini isibonakaliso
izici ezingezinhle zomuntu wanamuhla